Nepali Rashifal 2020 – नेपाली राशिफल २०२० – Nepali Horoscope
Home » 2020 » नेपाली राशिफल २०२०
Nepali Rashifal 2020 – नेपाली राशिफल २०२०
राशिफल 2020 अनुसार ताराहरूको आन्दोलनले के भन्छ? के तपाईंले सफलता पाउनुहुनेछ वा तपाईंले अब कुर्नुपर्नेछ? यो सबै थाहा पाउनु को लागि वार्षिक राशिफल 2020 पढ्नुहोस्। तपाईंको सम्भावनाहरू यो कुंडलीमा वैदिक ज्योतिषमा आधारित बताइएको छ। यस फल कथनको माध्यमबाट तपाईंको व्यवसाय, रोजगार, पैसा, स्वास्थ्य, शिक्षा र पारिवारिक जीवन सम्बन्धित सबै भविष्यवाणीहरू जान्नुहोस्। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाँइको आर्थिक स्थिति कसरी वर्ष 2020मा हुनेछ? या धन संबंधी समस्याहरूमा तपाँईलाई कुन-कुन चुनौतिहरू को सामना गर्नु पर्नेछ र ती चुनौतिहरूको सामना गर्न कस्ता प्रभावकारी उपायहरू गरिनेछ? त्यसोभए तपाईले यो राशिफल 2020 मार्फत सबै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
नोट – यी भविष्यवाणि तपाईँको राशिचिह्नमा आधारित छन्। यदि तपाईँले आफ्नो राशिचिह्न जान्नुहुन्न भने कृपया Moon Sign Calculator मा जानुहोस्।
मेष राशीको व्यक्तिको यस वर्ष स्वास्थ्य लाभ हुने छ । वर्षको सुरूमा स्वास्थ्य अवस्थामा उतार-चढावहरू भइरहने छन्, त्यसैले तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यको देखभाल गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रेम जीवनमा केहि कठिनाइ हुन सक्छन्, तर तपाइँको प्रेम तेज छ जसकारण तपाइँले चुनौतिहरूको बावजुद परिस्थितिहरूसित राम्रोसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ । तपाईं पनि मनपर्ने केहि काम गर्न सक्नुहुन्छ । प्रेम-विवाह गर्नेले अधिक जोखिम लिनु पर्ने छ र धेरै प्रयास गर्नु पर्ने छ । विवाहित जीवन आनन्दित हुनेछ र त्यहाँ कुनै ठूलो समस्या हुनेछैन। ससुरालीपक्षबाट कुनै दबाव बढ्न दिनुहुन्न। बच्चाले यस बर्स धेरै प्रगति गर्नेछ, जसले तपाईंलाई सन्तुष्टि हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा घाम-छायाको अवस्था रहनेछ। बुबाको स्वास्थ्य कमजोर रहन सक्छ। तपाईंको निवास ठाउँ परिवर्तन हुन सक्छ र तपाईंले आफ्नो परिवारबाट टाढा सर्नु पर्ने छ । तपाईंको परिवारमा शुभ कार्यहरू हुने संकेतहरू छन्। विद्यार्थीहरूले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछन् र तिनीहरू उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछन्। तपाईले आर्थिक प्रगति गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र वैदेशिक सम्पर्कबाट राम्रो लाभ पाउनुहुनेछ। यस बर्स तपाईलाई अचानक आर्थिक लाभ पनि हुन सक्छ । नातागोताहरु र सहकर्मीहरूको सहयोग पनि हुनेछ। यो बर्स क्यारियरलाई नयाँ ऊँचाई दिन गइरहेको छ, त्यसैले यस बर्सलाई पूर्ण स्वागत गर्नुहोस् र हरेक अवसरको फाइदा उठाउने प्रयास गर्नुहोस्।
वैदिक ज्योतिषका अनुसार, यस बर्स बृषभ राशीको व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा उतार-चढाव भईरहने छ। तपाईंलाई काम र आरामको बीचमा सन्तुलन बनाइर राखनु आवश्यक हुनेछ, किनकि तपाईंलाई शारीरिक समस्याहरूको सामना गर्नु हुनु सक्नुहुन्छ। विशेष रूपमा मांसपेशिहरु र स्नायु सम्बन्धी समस्या हुनु सक्छ। यो बर्स प्रेम जीवनको लागि अनुकूल छ र तपाईंको प्रेम जीवन गयरो हुँदई जाने छ। विवाहित व्यक्तिको लागि बर्सको सुरूआत राम्रो हुँने छइन, उनीहरूले जीवनसाथीको क्रोध भोग्नुपर्ने छ। यो अवधि बच्चाहरूको लागि सामान्य हुनेछ। तिनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि सामान्य असर हुने छ। साल को पहिलो पूर्ववर्ती पारिवारिक जीवनको लागि अनुकूल छैइन र आमा बुबाको स्वास्थ्यमा पनि असर पर्नेछ, तर सेप्टेम्बर पछि स्थिति धेरै अनुकूल हुनेछ। विद्यार्थीको लागि यो बर्स अनुकूल हुनैछ र तिनीहरूले विदेशी विश्वविद्यालयमा पनि प्रवेश पाऊंनु सक्नैछ। तपाईंको वित्तीय स्थिति धैरे चुनौतीपूर्ण हुनेछ र तपाईंलाई धैरे सोचे-समझेर हिटनु पर्नेछ। अन्यथा तपाईंलाई आर्थिक संकटको सामना गर्नु पर्नेछ। जे पनि होस, तपाइँ करियरको दृष्टिकोणले हेरदा तपाँईलाई राम्रो पद को प्राप्ति हुनु सक्नुहुन्छ। बर्स को छ महीना को भीत्र-भीत्र कार्य़ क्षेत्रको स्थितिहरू तपाँईको पक्षमा हुनैछ र तपाँईको प्रगति हुनु सक्नैछ।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार, मिथुन राशिको व्यक्तिहरूको यो बर्स स्वास्थ्यको लागि अनुकूल हुनैछ, यद्यपि तपाईंलाई समय-समयमा चिकित्सा परामर्शको आवश्यकता हुनु सक्नैछ। त्यसैले स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् र सबैभन्दा सानो से सानो समस्यालाई पनि उपेक्षित नगर्नुहोस्। बर्स 2020 प्रेम सम्बन्धका लागि धेरै राम्रो हुनैछ र यस समयमा तपाईंले आफ्नो जीवनमा राम्रो परिणामहरू महसुस गर्नुहुनैछ। कुनै कुराको लागि तपाँई दुबैजनाको बीच बहस हुनु सक्नैछ, तर तपाईंहरू सोच-समझेर राम्रो संग कुरा मिलाईरे अगाडी बढ़े भनी, तपाईंको प्रेम जीवन विभिन्न चुनौतिहरू हुनु को पछि पनी राम्रो संग चलने छ। आफ्नो मायालुलाई बराबरीको दर्जा दिनछ तो तपाईंको प्रेम जीवनमा मिठास आउनेछ। विवाहितहरू ले आफनो साथीहरूको स्वास्थ्यको ध्यान राखनु पर्नु हो र ससुरालीहरू संग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु हुनैछ। विवाहित दंपत्ती को एक दूसरासंग माया बढ़ने छ। यो समय बच्चाहरू को लागि धेरै राम्रो हुनैछ र उहाँले शिक्षामा र केही रचनात्मक क्षेत्रहरू आफनो चासो विकासित गर्ने छ। पारिवारिक जीवनमा हेरे भने, परिवार को सदस्यहरू ले आध्यात्मिक क्लबहरूमा धैरे ध्यान दिनैछ। यद्यति कुनै-कुनै व्यक्तिहरू संग केही विरोधाभास रहनु सक्नै छ। रूपया-पैसा र धन संबंधित विवादले परिवारमा कलह हुनु सक्छ। विद्यार्थीहरू को लागि यो बर्स सामान्य रहनै छ। व्यावसायिक कोर्स गर्ने विद्यार्थीहरू लाई महत्वपूर्ण सफलता पाने छ। वित्तीय निर्णय लिनु भन्दा पहिले धैरे सोच-बिचार गर्नु पर्ने हो। किनकी आर्थिक दृष्टिकोण ले हैरे भने यो बर्स सामान्य रहने छ। क्यारियरको लागि बर्स को सुरुआत चुनौतिपूर्ण रहनु सक्छ। यस लागि तपाईंलाई धैरे मेहनत गर्नु परने हो। यो बर्स तपाईंले नया व्यापार न सुरू गरे भनी राम्रो हुनै हो।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार, कर्कट राशीको व्यक्तिहरूले यो बर्ष आफ्नो स्वास्थ्य र सन्तुलित दिनचर्या को विशेष हेरविचार गर्नुपर्ने छ। तपाईंलाई पित्त सम्बन्धित शारीरिक समस्या हुनुको संभावना छ। प्रेम ले गर्दा तपाईको जीवनमा लामो समयको लागि परिवर्तन हुनु सकछ र तपाईं एक आदर्शवादी प्रेमी को पहिचान बनाऊनु सक्नु हुनछ। ध्यान राखने कुरा यो छ कि एक भन्दा धैरे मानछेहरूमा चासो थपदा तपाईं को रिश्तेदारी प्रभावित हुनु सकछ। वैवाहिक जीवनमा घाम-छाया हुनदै रहने छ। तपाईंको वैवाहिक जीवन कति पनि समस्याहरू आए पनी अगाडि बढदई जाने छ। तपाईलाई आफनो जीवन साथी संग-संग हिड्दई रहनु पर्ने छ। पारिवारिक जीवन वरिपरि भई रहने छ। तपाई को आमा को स्वास्थ्यको देखभाल गर्नु पर्ने छ। विद्यार्थीहरू को लागि यो बर्स कडा परिश्रम गर्नुको संकेत दिन दई छ। तपाईंलाई आफनो लक्ष्य प्राप्त गर्नुको लागि ध्याल लगाएर कड़ा परिश्रम गर्नु जरूरी छ। आर्थिक समस्याहरू आने छ त्यस लागि तपाईंलाई संघर्ष गर्नु पर्ने छ र अर्कोतर्फ तपाईको खर्चामा वृद्धि हुनु सकछ। त्यसो भए आफनो बचतको ध्यान दिनु पर्ने र धन-संपत्ति संबंधित कुरामा सोचे-समझेर पैसा लगाऊनु पर्ने छ। क्यारियर को लागि बर्स को सुरुआत लाभदायी रहने छ। तपाईं कुनै पनि ठुलो व्यापारको संग जुडेर काम गर्नु सकछ।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार सिंह राशीको व्यक्तिले यो बर्स राम्रो स्वास्थ्यको लाभ प्राप्त हुनै छ र यस राम्रो स्वास्थ्यको तपाईंले आनंद लीने छ। तपाईंलाई एक कुराको ध्यान राखनु पर्ने छ कि बेला-बेलामा ध्यान र योग र एक्सरसाइज गर्नु, त्यसो भए तपाईं मधुमेह, मोटेको जस्तो समस्याहरू संग मुक्त रहनु सकछ। जीवनमा मायाले परिवर्तन आनु सकछ र कुनै रिश्तेदारी संग संबंध समाप्तहुने कुरा पनि हुनु सकनै छ। कुनै पनि निर्णय लिनछ भनी सोचे-समझेर लिनु होस किनकी धैरे निर्णय तपाईं को जीवनको लागि कड़ा निर्णय हुनु सकछ। तपाईं विवाहित हुनु हुनछ तो तपाईंको वैवाहिक जीवनमा तनाव हुनु सकछ। राम्रो यह हुनु सकछ कि बेला-बखत रहन्दा वैवाहिक जीवनमा समस्याहरू उत्पन्न हुनु भन्दा पहिले गलतफहमीहरू लाई दूर गरी दिनु र आर्कासंग सामान्य व्यवहार गर्नु। यो बर्सको अन्तिम महीनाको दिनहरू वैवाहिक जीवनको लागि राम्रो हुने छ। यद्यपि तपाईंको संतानको लागि यो बर्स धैरे राम्रो हुने छ र तिनीहरू प्रत्येक कार्यमा प्रगति गर्ने छ। तिनीहरूको संस्कारमा वृद्धि हुने छ र ठुलो मानछेहरूको सम्मान गर्ने छ। पारिवारिक दृष्टिकोणको कुरा गरौं तो यो बेला चुनौतिपूर्ण हुने छ। अर्कोतर्फ बर्सको सुरुआत राम्रो रहने छ र परिवारमा नया मानछेको आगमन हुनु सकछ। यदि तपाईं परिवारलाई थपीराख्नु हुनछ भने तपाईंलाई समझौताहरू गर्नु पर्ने छ। विद्यार्थीहरू को लागि यो बर्स धैरे सफलता दिनेवाला हुनेछ र प्रतिस्पर्धा परीक्षामा सफलता भेटनुले तपाईंको मनोबल बढेको रहने छ। तपाईंले आफनो आर्थिक जीवन परिवर्तन गराऊनुको आवश्यकता हुने छ, किनकी यो आर्थिक अवस्था माथि-तल हुदै रहने छ। धन लाभको लागि तपाईंलाई कडा परिश्रम गर्नु पर्ने हो। तपाईं कामको क्षेत्रमा आफनो काममा केंद्रित हुने छ र यो तपाईंको काम लाई धैरे राम्रो बनाऊनुमा काम आने छ। क्यारियरको दृष्टिकोणले हेरदा यो बर्स राम्रो हुने छ।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार, कन्या राशिको व्यक्तिको यस बर्स तपाईं राम्रो स्वास्थ्यको मामलामा भाग्यमानी साबित हुनेछ र उत्तम स्वास्थ्यको आनंद लीने हो। तपाईंले आफ्नो दैनिक दिनचर्या नियमित गर्नु आवश्यक हुने छ। यो बर्स प्रेम जीवन गहिरो हुने छ र तपाई आफनो साथीको संग धैरे विश्वासी हुने छ। तपाईंको प्रेममा स्थिरता आने छ र साथीसंग आरामको क्षणहरूको आनंद लिने हो। तपाईं विवाहित छ भने वैवाहिक मानछेहरूको लागि यो बर्स उपलब्धिवाला हुने छ। तपाईंको जीवनसाथीलाई तिनको कार्यक्षेत्रमा ठुलो सफलता प्राप्त हुनु सकछ। थोडा दिनको लागि एक-आर्कासंग दूर रहनु पर्नु भई सकछ तर तपाईंहरू को संबंध गहिरो र मीठो हुने छ। बच्चाहरूको लागि यो बेला राम्रो रहने छ। पारिवारिक जीवन को लागि यो बर्स धैरे अनुकूल हुने छ र परिवारमा एक-आर्काको सहायताले अगाडी बढने हो, त्यसले गर्दा तपाईंको परिवारलाई सामाजिक रूपले सम्मान र संपन्नता प्राप्त हुने छ। कन्याराशिको विद्यार्थीहरूको लागि यो बर्स कुनै ठुलो उपलब्धि प्राप्त हुनु सकछ, तपाईंको लागि यो बर्स राम्रो प्रमाणित हुनेछ, किनकी तपाईंको धैरे प्रयास सफलता कमानु सकछ। वित्तीय दृष्टिकोणले यो बर्स धैरे अनुकूल हुने छ र निरन्तर पैसाको आय हुने छ, त्यसले गर्दा तपाईं खुशी हुने छ। यो बर्स तपाईं कुनै नया गाडी किन्नु सकने छ। क्यारियरको दृष्टिकोणले यो बर्स प्रगतिशील प्रमाणित हुनु छ र तपाईंको क्यारियरमा परिवर्तन पनी हुनु सकने छ। सम्भवतः जगाको परिवर्तन पनी भई सकछ। मल्टिनेशनल कंपनीमा कार्य गर्ने मानछेहरू को लागि यो बर्स उपलब्धिवाला रहने छ। यो बर्स तपाईंलाई आफनो साथीहरूको मद्दत प्राप्त हुने छ आनि तपाईलाई अगाडी बढनुको लागि प्रेरित गर्ने छ।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार तुलाराशिको व्यक्तिको यो बर्स स्वास्थ्य कमजोर हुने संभावना छ। तपाईंलाई अपच, हवा रोग, टाउको दुखाइ, जॉईंट दुखाइ, चिकनपोक्स र शरीर दुखाइ जस्तो समस्याहरू बाधा गर्नु सकछ। राम्रो शरीर सबई भन्दा ठुलो धन छ यसलागि आफनो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको प्रति लापरवाही गर्नु हुनैदईन। तपाईंको प्रेम जीवनमा स्थिरता आने छ र यो बर्स तपाईंलाई जीवनलाई राम्रो संग बांच्नको लागि राम्रो बाटो पाने छ। तपाईंको प्रेम जीवनमा रोमांस र आकर्षण बढने छ। तपाईं ब्याहभाको छ त दांपत्य जीवनको लागि बर्सको सुरुआत केही नाजुक रहने छ र तपाईंको जीवनसाथीको स्वास्थ्य माथि-तल रहने छ। यद्यपि बर्सको बीचमा स्थितिहरू राम्रो भईजाने छ र तपाईं आफनो वैवाहिक जीवनमा अगाडी बढदई जाने हो। बच्चाहरूलाई जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नुको लागि कडा परिश्रम गर्नु हुनेछ र तपाईंको कुनै बच्चाको यो बर्स ब्याह हुनु सकनै छ। पारिवारिक जीवनको लागि यो बर्स राम्रो हुने छ र तपाईं आफनो धैरे समय कुटुम्बसंग बिताए भनी तपाईंको संबंध राम्रो हुनेछ। विद्यार्थीहरूको लागि यो बर्स राम्रो रहने छ र नोकरी खोजनेहरूलाई कडा परिश्रमको पछि नोकरी पाइनेछ। शिक्षाबाट संबंधित वैदेशिक यात्रा संभव हुने छ। आर्थिक अवस्थामा यो बर्स सामान्य रहने छ। एक भन्दा धैरे स्रोत बाट आय हुनेछ तर खर्चाहरू पनि हुँने छ। यो बर्स तपाईंले कुनै नया व्यापार सुरु नगरे राम्रो हुनैछ र नोकरीमा पनि कडा परिश्रम गर्नुको सलाह दिनदैई छ।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार, बृश्चिक राशिका व्यक्तिको यो बर्स स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुने हो। बेला-बेलामा कुनै मानसिक समस्याहरू आने हो तर कुनै धैरे ठुलो समस्याको स्थिति आने छईन। यो बर्स तपाईँको प्रेम जीवन आरामसंग बितने हो र एकल मानछे को जीवनमा कुनै नया व्यक्तिको प्रवेश हुनु सक्छ। तपाईंको जुन व्यक्ति संग झगडा भईर छुट्टी गा छ त्यो व्यक्ति पलटेर फैरी तपाईंको जीवनमा आनु सक्छ। यो बर्स दांपत्य जीवनको लागि धैरे राम्रो हुने छ र तपाईं आफनो जीवनसाथी संग अगाडी बढदई जानै हो र भविष्यको लागि महत्वपूर्ण निर्णय पनी लिनु सक्छ। तपाईंको जीवनमा आकर्षण रहने छ। कुटुम्बमा कुनै कुराले तनाव र झगडाको संभावना हुनु सक्छ, यसलागि शांत चित्त हुनु राम्रो हुनेछ। परिवारमा कसैको विवाह र नया बच्चाको जन्म हुनुले खुशि हुने छ। विद्यार्थीहरूलाई संघर्षको पछि सफलता प्राप्त हुने छ। आर्थिक दृष्टिले यो बर्स राम्रो रहने छ र तपाईं बचत गर्नुमा सक्षम हुनु हुन्छ। यो बर्सको सुरुआतमा कुनै नया कार्य सुरू गर्नु सक्छ र जस्तो-जस्तो यो बर्ष बढदई जानैहो तपाईंलाई प्रगतिको अबसर मिलदई जाने हो। यो बर्स तपाईंको उर्जाको सहि प्रयुक्त गर्नेले पक्का सफल हुनेछ।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार, धनु राशिको व्यक्तिको यो बर्सले भन्दई छ कि तपाईंको यो बर्स स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ र सानातिना समस्याहरू को अतिरिक्त कुनै ठुलो समस्याको संभावना छईन। प्रेम संबंधको लागि यो बेला राम्रो रहनैछ र तपाईं आफनो माया संग निकटताको अनुभव हुनेछ। तपाईंको साथले पनि तपाईंको भावनाहरू बुझने छ र तपाईं कौसेलाई कुनै प्रस्ताव गर्नुको बारामा बिचार गरिराछ त तैसमा तपाईंलाई सफलता भेट्ने छ। दांपत्य जीवन मीठो हुनैछ र जीवनसाथीको संग राम्रो समन्वयको साथ विवाहित जीवनको आनन्द लिनुहुनेछ। यद्यपि तपाईंलाई आफनो जीवनसाथी को स्वास्थ्यको विशिष्ट ध्यान दिनु पर्ने हो। निसंतान दंपत्तिहरूलाई संतानको प्राप्ति हुनु सक्नैछ। यो बर्स तपाईंको बच्चाले प्रगति प्राप्त गर्नेछ। यो बर्स तपाईंलाई सम्पति संबंधित लाभ हुनेछ र पारिवारिक जीवन धैरे हदसम्म आराम पूर्ण हुनेछ। घर परिवारमा कुनै नया सदस्यको आगमन हुनु सक्छ। पढाई-लिखाईको क्षेत्रमा मिश्रित परिणामको प्राप्ति हुनेछ। तपाईं जति परिश्रम गर्छ तैतई आर्थिक लाभ पाने छ। क्यारियरमा वैदेशिक स्रोतले राम्रो लाभ पानेछ र आफनो कार्यमा तपाईंको सराहना गरिनेछ। तपाईले चाहेको स्थानमा स्थानान्तरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो बर्स राम्रो संभावना दर्शाउँछ।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार मकर राशिको व्यक्तिहरूको लागि यो बर्स तपाईंको लागि धैरे तरिकामा राम्रो हुनेछ। यद्यपि तपाईंको स्वास्थ्यको संबंधित मिश्रित परिणामोंको प्राप्ति हुनेछ। तपाईं एक पुरानो रोग बाट मुक्त हुनेछ। जीवन संबंधित धैरे मोर्चाहरूमा कडा परिश्रम गर्नु पर्नेछ। प्रेम जीवनको लागि यो बर्स अनुकूल हुनेछ र तपाई मध्ये केही मानछेहरूको ब्याह हुनेछ र तपाईं आफ्नो प्रिय लाई आफ्नो बनाउन मा सफल हुनेछ। यद्यपि विवाहितहरूको दांमपत्य जीवनमा माथि-तलको स्थिति रहनु सक्छ। तपाईंलाई ध्यान राख्नु पर्ने कि आफनो कार्यको संग-संग जीवनसाथीलाई पनि समय दिनु पर्नेछ। बच्चाहरूको लागि यो बर्स धैरे अनुकूल छईन, यसलागि बेला-बखतमा तिनहरूको ध्यान राखनु र प्रोत्साहित गर्नु पर्नेछ। पारिवारिक जीवन राम्रो रहने छ र तपाईंलाई मान र सम्मानको प्राप्ति हुनेछ। भाई-बहिनीहरूको ध्यान राखनु राम्रो हुनेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईंलाई कडा परिश्रम गर्नु पर्नेछ तबई राम्रो परिणाम भेट्ने छ। आर्थिक दृष्टिकोणले हेरदा यो बर्स अली कमजोर रहनु सक्छ, यसलागि आफनो धनको लेखा पुस्तक राम्रो राखनु त्यसो भए कुनई पनि तरीकाको आर्थिक समस्याबाट बाच्न सकिन्छ। बेरोजगार मानिसहरूलाई स्थायी जागिर पाउने सम्भावना धेरै कडा छ।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार कुम्भ राशिका व्यक्तिको यो बर्स तपाइँले केही चुनौतिहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र तपाइँले मिश्रित परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस बर्स तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ किनकि स्वास्थ्य संबंधि समस्याहरूले तपाईलाई सताउन सक्छ। यो बर्स धैरे यात्राहरू हुनेछ, त्यस बाट कुनैमा तपाईंलाई इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईंको आय राम्रो हुनेछ तर धैरे खर्चाको कारण वित्तीय समस्या उत्प्न्न हुनु सक्छ। यो बर्स तपाईं आध्यत्मसंग संबंधित धैरे राम्रो अनुभव पाउनेछ। विदेश जाने व्यक्तिहरूको इच्छा यो बर्स पूरा हुनु सक्छ। यो बर्स तपाईंको जागिरमा स्थानान्तरणको योग भईरा छ त्यस कारण तपाईंको बर्तमान गर्वको संग परिवर्तन हुनु सक्छ। बेला-बखतमा आफनो सबैभन्दा नजिक मानिसहरूको ध्यान राखनु पर्ने र तिनिहरूको आवश्यकताको अनुसार मद्दत गर्नु र एउटा उपहार पनी दिनु होस, जसले गर्दा रिश्तेदारीमा कुनै तरिकाको तनाव न होस। विद्यार्थीहरू को लागि यो बर्स धैरे कडा परिश्रम गर्नु पर्नेछ। तर, आफ्नो देश मा शिक्षा प्राप्त गर्नेहरूको इच्छा पूरा गर्न सकिन्छ। तपाईंको पारिवारिक जीवन उतार-चढावहरूले भरिपूर्ण हुनेछ। अर्कोतर्फ, विवाहित जीवनमा, खुशी र कहिलेकाहीं शोकको वातावरण हुनेछ। तपाईको जीवनसाथीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस्। प्रेम जीवनको लागि यो समय अलि प्रतिकूल छ, त्यसैले परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आफैलाई सञ्चालन गर्नुहोस्।
वैदिक ज्योतिषको अनुसार मीन राशिको व्यक्तिलाई यो बर्स आफनो कार्यमा सफलता र राम्रो धन लाभको प्राप्ति हुनेछ। तपाईंलाई आफनो मित्रहरू, प्रियहरू र नजिकका व्यक्तिहरूको संग भेटघाटको अवसर पाइनेछ। तपाईंले जुन काम गर्नु हुनछ तेसमा आफनो उत्तम प्रदर्शन गरी राख्नु, किनकी यो बर्स तपाईंलाई त्यो कडा परिश्रमको परिणाम प्राप्त हुनेछ र कुनै उपलब्धि पनी तपाईंको खातामा थपनु सकछ। तपाईको पारिवारिक जीवनमा केहि समस्याहरू हुनसक्दछन् तर तपाईले बुझ्नुभएको कारण तपाईले ती चुनौतीहरूलाई ठूलो हदसम्म पराजित गर्नुहुनेछ। तपाईले समाजका सम्मानित र बुजुर्गहरुको आशिष् पाउनुहुनेछ, जसको कारणले तपाई आफ्नो काममा सफल हुनुहुनेछ। अत्यधिक व्यस्तताले तपाईंलाई थकाउनु सक्छ र एसको प्रभाव तपाईंको काम र शरीरमा पार्न सक्छ। त्यसैले कामको बीचमा समय अवश्य लिनुहोस्। तपाईंको अधिकांश इच्छाहरू यस बर्ष पूरा हुनेछ। तपाईंलाई एक अनुभवी व्यक्तिको संग पानेछ। समाजमा तपाईंको सम्मान बढ्नेछ। तपाईंको यात्राहरू यस बर्ष छोटो हुनेछ र तपाईं वित्तीय फारममा प्रगति हुनुहुनेछ। व्यापार मा विस्तार हुनाले, तपाईले अभूतपूर्व सफलता पनि पाउनुहुनेछ।